The Barbaric Ethiopian security forces are out of control killing the Oromo people indiscriminately! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsThe Barbaric Ethiopian security forces are out of control killing the Oromo people indiscriminately!
Mucaan kun Caalaa jedhama. Tilmaamaan nama waggaa 18 olii akka ta’e hunduu ni hubata. Kanaafuu, waanta godhu hundaa nama biroo otoo hin taane matuma isaa kan ilaallatudha. Sababa mucaan bosona jiruuf halkan tokkotti abbaaf haadha ajjeesan.
Waan tokko jechuun barbaada. Wayita OPDOn saree ergamtuu Wayyaanee taatee oromoo nyaachaa turte sanayyuu ilmaan hooggantoota OPDO olii hanga gadii irratti Qeerroon oromoo harka isaa isaanirratti hin kaasne. Hojii badaa jarri hojjetteef maatiin jaraa tasa hin tuqamne. Maatii jaraa miti isaanumtuu hin tuqamne.
Amma seenaa baay’ee gurraachatu uumamuuf adeemaa jira. Tarkaanfii gadheen maatii Caalaa irratti raawwate maatii warreen mootummaa ofiin jedhanii irratti akka hin raawwanneef wabiin homaatuu hin jiraatu. Abiddi kun immoo hunduma wal qixa huba. Oromiyaas dachee dhiigaa taasisa. Kanarraa of qusachaa adeemuu wayya. Namni waan barbaadetti amanee hiriiruun mirga. Sababa ejjennoo nama tokkoon garuu maatiin gatii kafaluu hin qabu. Maatii warra mootummaallee dabalatee.
Fighting climate change and poor health with 5 billion trees.
📕 Read more: https://t.co/OtcdxCC2SQ pic.twitter.com/QDrRtKQyN4
— World Economic Forum (@wef) June 5, 2020
ብልፅግና የሚባል የሽፍታ ቡድን በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ግፍ ተመልከቱ ይሄ ወላይታ ውስጥ ነው
#Kaachisii, Ginda-barat (Inbox)
“Namni kun Girmaa Caalaa jedhama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Gindabaratitti barsiisaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaafi qophaa’inaa Gindabarat yoo ta’u shira bilxiginnaatiin gaafa guyyaa 28/09/2012 achuma magaalaa Kaachisiitti to’atamee yeroo ammaa buufata poolisiitti argama. Qilleensarra nuuf oolchi!”
The Ethiopian Military Torturing An Oromo Civilian in Gujii Zone of Oromia
Obboo Dinquu Dayasaa Qabenyaa Oromo Qabenyaa Isaa Saamuufi Isale Biyara Ari,ufi Bilxiginan dorsisan